Ezi Arụmọrụ Mmiri
Home > Ngwaahịa > Ezi Arụmọrụ Mmiri (Total 18 Ngwaahịa maka Ezi Arụmọrụ Mmiri)
Ezi Arụmọrụ Mmiri - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
Anyị bụ ndị ọkachamara Ezi Arụmọrụ Mmiri manufacturers & suppliers / factory from China. Ebube Ezi Arụmọrụ Mmiri na akwa dị elu dịka obere ọnụahịa / ọnụ ala, otu n'ime Ezi Arụmọrụ Mmiri na-eduzi ụdị aha si China, ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD .
Mbara Igwe Na-eme Ka Elu
Tag: Ezi arụmọrụ mmiri , Smart Sensọ Switch , Adaba na ihu igwe dị otutu
A na-agbanwe oghere ndị dị na mbara igwe ka ọkụ eletrik na-eme ka batrị lithium dị na ọkụ ọkụ na-agbanye ọkụ. N'ehihie, ọbụlagodi na ụbọchị igwe ojii, generator generator (panel panel) na-achịkọta ma na-echekwa ike ahụ achọrọ, na-enye onwe ya...
Ọkụ nke Na-ahụ Maka Ụmụaka Na-enwu Ọkụ Mmiri nke Na-enwu Ọkụ
Tag: Ebube nke mmadụ na-enwu , Okpokoro Mmiri , Mmiri na-enwu ọkụ na mmiri
Ultra - na-egbuke egbuke, waterproof na ajari - ihe akaebe, aluminom alloy ihe onwunwe, integrated ọkụ isi nke a n'èzí mbara igwe idei mmiri . O nwere uru nke ndụ ogologo, arụmọrụ dị elu na nchekwa ikike, ugbo alammadụ, na-egbukepụ egbukepụ na...
Mmiri Ike Mmiri nke Mmiri
Tag: Wepụ Grid Power Generation System , Usoro Ntanetị Njikere Mberede , Ngwuputa Ugbo Obere Ike ulo
Gbanyụọ usoro ọkpụkpụ ike gọọmentị bụ nke e dere na sistemụ solar cell, njikwa na batrị nchekwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye ọrụ AC, ịkwesịrị ịhazigharịa ihe ntụgharị nke AC. A na-ebufe batrị site na ogwe aka, ma a ga-enye ya ibu ibu ụlọ na enweghị ìhè na...
Tag: Njikwa Multifunction Bluetooth nke dị na mbara igwe , Ngwá Ọrụ Ngwá Agha Dị Mkpa , Igbe Mgba Mgba Igwe
Igwe ntanetị Bluetooth nke dị na mbara igwe bụ ọgbọ nke ike anyanwụ na-emetụta ike ọkụ anyanwụ, ọ dịghị mkpa ka ọ na-akwụ ụgwọ penny, na-eme ka mma ndụ dị na mpaghara enweghị ike. A na-eji sheka, ọmarịcha ma na-emesapụ aka, nke nwere ike ịnweta, nke...
Tag: Egwuregwu nke Ejiri Ike , Ọhụrụ na Pụrụ Iche Kere , Na-echekwa ihe ndị ọzọ
Ngwomoku ohuru ohuru nke na-ekpo oku na ikuku oyi na -acho ume na ume na mmanu ndi ozo dika ume kachasi ike n'oge mmeputa oku, nke bu uzo ahihia n'ezie. N'ime mmiri refrigeration, a na-eji obere eletrik eme ihe iji mee ka mmiri dị ala dị...
Igwe ọkụ lawn na-acha ọkụ na-acha ọkụ mmiri
Tag: N'elu Mmiri Rainproof Solar Lawn oriọna , Okpokoro Osimiri Na-acha Ncha , 0 , 5W Okpokoro Osimiri Osisi
LED anyanwụ lawn oriọna anyanwụ panel adopts 0.5w monocrystalline silikọn anyanwụ panel. Na-arụ ọrụ awa 8-10, oge nkwụ ụgwọ oge 6-8, njikwa ọkụ. Ngwongwo ndị dị na anyanwụ na-afanye batrị n'ụbọchị ahụ ma na-agbanye ọkụ ozugbo na abalị. Enwere...
Ogwe Mmiri nke Na-ahụ Maka Nchapu Mmiri nke Na-ahụ Maka Ngwongwo
Tag: Ìhè maka Camping , Panel nke anyanwụ na-enweghị ike ịchọta , Igosipụta Ihe Atọ
Ngwaahịa ahụ nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ntọghata, obere ahụ ọkụ, ọnụego ntọghata nkezi dịka 88%, batrị niile bụ ihe ngwaahịa batrị, ọ bụghị akara efu, akara ikike bụ ikike n'ezie, nkwụsị aka, batrị niile ejirila ọrụ ndị na-emepụta igbe na otu...
Ezi Arụmọrụ Mmiri akwa si China, Direct Zụta si China na-eduga ndị nrụpụta na ọnụahịa ụlọ ọrụ dị ala. Chọta akwa Ezi Arụmọrụ Mmiri ngwaahịa na ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD ma nweta akwa mma Ezi Arụmọrụ Mmiri kpọmkwem site na a pụrụ ịtụkwasị obi Chinese Ezi Arụmọrụ Mmiri wholesalers & suppliers. Zipu ihe ị chọrọ ịchọrọ & Mee nzaghachi ozugbo.